Thursday July 03, 2014 - 19:10:48 in Wararka by Super Admin
Siyaasiyiin,odayaal dhaqameedyo iyo ururada bulshada ayaa wax aan laqaadan karin ku tilmaamay goodiska isdaba joogga ah ee maalmahan kasoo yeerayay Xasan Sheekh iyo saraakiisha ammaanka.
Siyaasiga Xasan Nuur ayaa sheegay in hardanka dhanka ammaanka ah ee gobolka Banaadir ka socda uu yahay mid xiisa gaar ah islamarkaana soo jiitay kumanaan reer Muqdisho ah.
Khamiistii lasoo dhaafay ayuu Xasan Sheekh Villa Somalia uga dhawaaqay ol ole dagaaleed natiijadiisu noqotay raaf kaasi oo loogu magac daray "Nabad Ku Afur”.
"Muqdisho ammaan kama jiro xaafadaha waxaa shacabka ku dhaca ciidamada dowladda qaad cunayaasha ah,saqdii dhexe muwaadiniinta waxaa iyagoo hurdaya guryaha ugu daata maleeshiyaad gafuurradu uduubanyihiin marka aaway dowladnimadii la sheeganayay”ayuu yiri Xasan Nuur.
Nabadoon Max’med Guuleed Fartaag oo ah afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga Hawiye ayaa ka jawaabay goodiska xasan Gurguurte wuxuuna ku tilmaamay mid iska dheh ah oo aan waxba soo kordhin.
"Ninkan madaxweynaha sheeganaya ee gaalada dabadhilifka u ah nabad uma hayo shacabka Muqdisho oo isagaaba nabadda liddi ku ah,haddii uu ka hortegi karo weerarada mujaahidiinta waa loo wada joogaa”Maxamed Guuleed.
Siyaasiga Xasan Nuur ayaa markale sheegaya in dagaalka dhanka ammaanka ah ee gobolka Banaadir looga gacan sarreeyo AMISOM,shirkadaha amniga Xalane ku sugan iyo dowladda Federaalka ee Villa Somalia deggan.
"Runtii Xoogaga Al Shabaab dagaal dhanka ammaanka ah way uga adkaadeen Dowladda Federaalka iyo AMISOM,dhammaan degmooyinka Banaadir Al Shabaab ayaa ka howlgala askarta iyo saraakiisha dowladda ayay dilaan uma malaynayo in qolada Xasan Sheekh ay leeyihiin hay’ado ammaan oo dadku ku kalsoonyihiin” Xasan Nuur.
Caddeymahan ay bixiyeen siyaasiyiinta iyo waxgaradka muqdisho ayaa kusoo aadaya waqti dilalka iyo qaraxyadu ay Muqdisho kusii kordhayaan islamarkaana Al Shabaab ay ka dhabaysay goodiskeedi ahaa in bisha Ramadaan ay weerarada xoojinayso.